के भयो प्रचण्डलाई एकाएक ? एमालेसँग बांगिएर सरकार आफै चलाउने रे !
काठमाडौं, ५ कार्तिक । केन्द्रिय राजनीतिमा चतुर खेलाडिको नाम हो प्रचण्ड । प्रचण्डले नेतृत्व गरिरहेको नेकपा माओवादी केन्द्र मंसिर १० र २१ गतेको प्रदेश र प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न भएलगत्तै नेकपा एमालेसँगको गठबन्धन तोड्ने भित्री तयारीमा गरिरहेको खबर छ ।
प्रचण्ड निकट स्रोतका अनुसार एमालेसँग चुनावी तालमेलबाहेक अन्य एकता वा गठबन्धन बनाएर जाने पक्षमा देखिएका छैनन् । यो पटकको निर्वाचनमा आफ्नो पार्टीका उम्मेद्धवारहरुको जित सुनिश्चित गराउनको लागि मात्रै उनले एमालेसँग गठबन्धन गरेको बुझिएको छ।
खासगरी पहाडी भेगमा कम्तिमा पनि १० जना नेताहरुलाई विजयी गराएर केन्द्रिय संसदमा पुर्याउने उनको भित्री योजना छ । सोही अनुसार उनले एमालेसँग चुनावी गठबन्धन गरेको पुष्टि भएको छ ।
एमालेसँग मिलेर जाँदा ३५ देखि ४० सिट जित्ने संभावना देखिएकोले उनले कांग्रेससँगको गठबन्धन टुटाएर एमालेसँग नाता जोडेका हुन । प्रचण्ड स्वयं पनि आफ्ना नेताहरु पहाडमा असुरक्षित देखेका थिए ।
उनले एमालेसँगको गठबन्धनपछि चुनाव जितेपछिको परिस्थितिमा भने पार्टी एकता नगर्नेसम्मको परिस्थिति आउन सक्ने बताइएको छ । गठबन्धनसगँ मिले पछि प्रचण्ड माओवादी खस्केको टिप्पणी आइरहेका बेला यस्तो खबर बाहिर आएको हो ।
‘सकेसम्म ३ वटा प्रदेशमा एमालेसँग मिलेर सरकार बनाउने र केन्द्रमा भने आँफै नेतृत्व लिने प्रचण्डको खेल छ । यसले गर्दा एमालेसँग माओवादीको दिर्घकालिन गठबन्धन वा पार्टी एकतासम्म पुग्लाजस्तो देखिँदैन्।’
चुनावी नतिजा आफूले भनेजस्तो आयो भने उनी आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउनेगरि अहिलेदेखि लविङ सुरु गरेकाछन् ।